Akwụkwọ a nwere otu isiokwu dum gbasara mgbakọ ọnụ, mana ya onwe ya bụ mmekọ ọnụ. O doro anya na akwụkwọ a agaghị adị ma ọ bụghị n'ihi nkwado dị mma nke ọtụtụ ndị mmadụ na òtù dị ebube. N'ihi nke ahụ, enwere m ekele dị ukwuu.
Ọtụtụ ndị nyere nzaghachi banyere otu ma ọ bụ karịa isikwụkwọ ndị a ma ọ bụ soro m kwurịta mkparịta ụka banyere akwụkwọ ahụ. Maka nzaghachi a bara uru, enwere m ekele maka Hunt Allcott, David Baker, Solon Baracas, Chico Bastos, Ken Benoit, Clark Bernier, Michael Bernstein, Megan Blanchard, Josh Blumenstock, Tom Boellstorff, Robert Bond, Moira Burke, Yo-Yo Chen, Dalton Conley, Shelley Correll, Jennifer Doleac, Don Dillman, Etan Fast, Nick Feamster, Cybelle Fox, Maggie Frye, Alan Gerber, Sharad Goel, Don Green, Eitan Hersh, Jake Hofman, Greg Huber, Joanna Huey, Patrick Ishizuka, Ben Jones , Steve Kelling, Dawn Koffman, Sasha Killewald, Harrissa Lamothe, Andrés Lajous, David Lee, Amy Lerman, Meagan Levinson, Andrew Ledford, Kevin Lewis, Dai Li, Karen Levy, Ian Lundberg, Xiao Ma, Andrew Mao, John Levi Martin, Judie Miller, Arvind Naranyanan, Gina Neff, Cathy O'Neil, Nicole Pangborn, Ryan Parsons, Devah Pager, Arnout van de Rijt, David Rothschild, Bill Salganik, Laura Salganik, Christian Sandvig, Mattias Smångs, Sid Suri, Naomi Sugie, Brandon Stewart, Michael Szell, Sean Taylor, Florencia Torche, Rajan Vaish, Jan na Vertesi, Taylor Winfield, Han Zhang, na Simone Zhang. M ga-enwekwa ikelele ndị nyochaa atọ na-amaghị aha ha nyere ndị nzaghachi aka.
Enwetara m nzaghachi magburu onwe ya banyere ihe odide nke sitere na ndị so na Open Review usoro: akustov, benzevenbergen, bp3, cailinh, cc23, cfelton, chase171, danivos, DBLarremore, pomegranate, dmerson, dmf, efosse, fasiha, hrthomas, onye ọ bụla, pkrafft, raminasotoudeh, rchew, rkharkar, sculliwag, sjk, Stephen_L_Morgan, sweissman, sigk, Stephen_L_Morgan, sweissman, sjk, Stephen_L_Morgan, sweissman, sjk, Stephen_L_Morgan, sweissman, goz, na vnemana. M ga-enwekwa ikelele Sloan Foundation na Josh Greenberg maka ịkwado Toolkit Open Review. Ọ bụrụ na ịchọrọ itinye akwụkwọ nke gị site na Open Review, biko gaa na http://www.openreviewtoolkit.org.
M ga-enwekwa ikele ndị na-ahazi na ndị na-eme ihe na-esonụ anya ebe m nwere ohere ikwu banyere akwụkwọ: Cornell Tech Connective Media Seminar; Ụlọ ọrụ Princeton maka Ọmụmụ Ihe Seminar nke Democratic Politics; Stanford HCI nchịkọta; Berkeley Sociology Colloquium; Òtù Na-arụ Ọrụ Na-arụ ọrụ na Russell Sage na Ngwakọta Sayensị Ọgwụ; Princeton DeCamp Seminar Bioethics; Usoro nke ọnụọgụ abụọ nke Columbia na Sciences Social Scholarship; Princeton Center maka Technology Technology Technology Technology na Group Reading Group; Simons Institute for Theory of Computing Workshop on New Directions in Computational Social Science & Data Science; Ụlọ Ọrụ Nyocha Ụlọ Ọrụ na Data Society; Mahadum nke Chicago, Mmekọahụ mmekọrịta; Nzukọ Mba Nile Maka Ngwakọta Sayensị Ahụhụ; Akwụkwọ sayensị Science Science na nchọpụta Microsoft; Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) Nzukọ Kwa Afọ; Mahadum Indiana, nkuzi nke Karl F. Schuessler na Usoro nke Research Research; Oxford Internet Institute; MIT, Sloan School of Management; AT & T Research 'Renaissance Technologies; Mahadum nke Washington, Ụlọ Akwụkwọ Izu Ọmụmụ Ihe Ọmụma; SocInfo 2016; Microsoft Research, Redmond; Johns Hopkins, Ụlọ Ọrụ Nyocha Ndị Mmadụ; Ụlọ Nzukọ Ọmụmụ Ihe Ọmụma Ihe New York City; na ICWSM 2017.
Ọtụtụ ụmụ akwụkwọ kemgbe ọtụtụ afọ emewo atụmatụ dị n'akwụkwọ a. Ọ ga-amasị m ikele ụmụ akwụkwọ na Sociology 503 (Usoro na Ụzọ nke Social Science) na Ọgwụgwụ 2016 iji gụọ ihe odide oge ochie, na ụmụ akwụkwọ nọ na Sociology 596 (Computational Social Science) na Fall 2017 maka pilot nwale azu ederede ihe odide a na klas.
Ebe ọzọ nke nzaghachi dị ebube bụ ihe omume akwụkwọ edemede m nke Princeton's Centre guzobere maka Ọmụmụ nke Democratic Politics. Ọ ga-amasị m ekele Marcus Prior na Michele Epstein maka ịkwado ogbako ahụ. M ga-enwekwa ikelele ndị niile na-etinye aka na oge ha na-arụsi ọrụ ike iji nyere m aka iwelie akwụkwọ ahụ: Elizabeth Bruch, Paul DiMaggio, Filiz Garip, Meagan Levinson, Karen Levy, Mor Naaman, Sean Taylor, Markus Prior, Jess Metcalf , Brandon Stewart, Duncan Watts, na Han Zhang. Ọ bụ n'ezie ụbọchị magburu onwe ya-otu n'ime ọrụ kachasị mma ma na-akwụghachi ụgwọ nke ọrụ m nile-na enwere m olileanya na enwere m ike ịmepụta ụfọdụ amamihe site na ụlọ ahụ n'ime ihe odide ikpeazụ.
Ndị mmadụ ole na ole kwesịrị inweta ekele pụrụ iche. Duncan Watts bụ onye ndụmọdụ m na-ede akwụkwọ, ọ bụkwa nyocha m mere ka m nwee obi ụtọ banyere nchọpụta mmekọrịta na afọ ndụ; enweghị ahụmahụ m nwere na akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ akwụkwọ a agaghị adị. Paul DiMaggio bụ onye mbụ na-agba m ume ide akwụkwọ a. O mere otu ehihie ka anyị nọ na-eche maka igwe kọfị na Wallace Hall, m ka na-echeta na ruo mgbe ahụ, echiche nke ide akwụkwọ adịghị echefe uche m. Ana m ekele ya nke ukwuu maka ime ka m kwenye na enwere m ihe m ga-ekwu. Ọ ga-amasịkwa m ikele Karen Levy maka ịgụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akụkụ nile nke mbụ na nke kachasị njọ; o nyeere m aka ịhụ nnukwu foto mgbe m rapaara na ata. Ọ ga-amasị m ịkele Arvind Narayanan maka inyere m aka ilekwasị anya ma dozie arụmụka dị n'akwụkwọ ahụ na ọtụtụ nri ehihie. Brandon Stewart nwere obi ụtọ mgbe nile ikarịta ụka ma ọ bụ lee anya n'isiakwụkwọ, nghọta na agbamume ya na-eme ka m na-aga n'ihu, ọbụlagodi mgbe m na-amalite ịwagharị n'akụkụ. N'ikpeazụ, m ga-ekele Marissa King maka inyere m aka iji aha a na-akpọ akwụkwọ a n'ehihie n'ehihie na New Haven.
Mgbe m na-ede akwụkwọ a, enwetare m aka site na nkwado nke ụlọ ọrụ atọ dị ịtụnanya: University Princeton, Microsoft Research, na Cornell Tech. Mbụ, na University of Princeton, enwere m ekele maka ndị ọrụ mụ na ụmụ akwụkwọ na Ngalaba Nkà Mmụta Sociology maka ịmepụta na ịnọgide na-enwe ọdịbendị na-enye obi ụtọ na nkwado. Ọ ga-amasị m ịkele ụlọ ọrụ Center for Technology Technology Technology maka inye m ụlọ nke abụọ nwere ọgụgụ isi mara mma ebe m nwere ike ịmatakwu banyere otu ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa si ahụ ụwa. Edere akụkụ nke akwụkwọ a mgbe m nọ na-ezumike nke si Princeton, n'oge a kwa, enwere m obi ụtọ na m ga-etinye oge n'ime obodo abụọ nwere ọgụgụ isi. Akpa, m ga-enwe ike ịkele Microsoft Research New York City maka ịnọ n'ụlọ m n'afọ 2013-14. Jennifer Chayes, David Pennock, na usoro nchịkọta nke ndị na-ahụ maka mmekọrịta ọha mmadụ bụ ndị magburu onwe ya na ndị ọrụ. Nke abụọ, ọ ga-amasị m ịkele Cornell Tech maka ịnọ n'ụlọ m na 2015-16. Dan Huttenlocher, Mor Naaman, na onye ọ bụla nọ na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Nkà na Ụzụ mere ka Cornell Tech bụrụ ebe dị mma maka m iji mechaa akwụkwọ a. N'ọtụtụ ụzọ, akwụkwọ a gbasara ijikọta echiche site na sayensị data na sayensị mmekọrịta, na Microsoft Research na Cornell Tech bụ ụdị nke ụdị nke ọgụgụ isi cross-pollination.
Mgbe m na-ede akwụkwọ a, enwere m enyemaka nyocha dị mma. Enwere m ekele maka Han Zhang, karịsịa maka enyemaka ya na -emepụta eserese n'akwụkwọ a. Enwere m ekele na Yo-Yo Chen, karịsịa maka enyemaka ya na-edepụta ihe ndị dị n'akwụkwọ a. N'ikpeazụ, ana m ekele Judie Miller na Kristen Matlofsky maka enyemaka nke ụdị nile.
Ọ bụ Luke Baker, Paul Yuen, na Alan Ritari nke Group Agathon dere akwụkwọ weebụ nke akwụkwọ a. Iso ha rụọ ọrụ a bụ ihe na-atọ ụtọ, dịka mgbe niile. Ọ ga-amasị m na-ekele Luke maka ịmepụta usoro iwu ụlọ maka akwụkwọ a ma nyere m aka ịnyagharị n'akụkụ ndị gbara ọchịchịrị nke Git, pandoc, na Mee.
M ga-ekele ndị na-enye aka na ọrụ ndị a anyị ji: Git, pandoc, pandoc-crossref, pandoc-citeproc, pandoc-citeproc-preamble, Hypothesis, Middleman, Bootstrap, Nokogiri, GNU Make, Vagrant, Ansible, LaTeX, na Zotero. Edere eserese niile n'akwụkwọ a na R (R Core Team 2016) , ma jiri nchịkọta ndị a: ggplot2 (Wickham 2009) , dillingr (Hadley Wickham and Francois 2015) , reshape2 (Wickham 2007) , stringr (Hadley Wickham 2015) , ụgbọ ala (Fox and Weisberg 2011) , na-efe efe (Wilke 2016) , png (Urbanek 2013) , grid (R Core Team 2016) , na ggrepel (Slowikowski 2016) . Ọ ga-amasị m ịkele Kieran Healy maka akwụkwọ ozi ya nke mere ka m malite na pandoc.
Ọ ga-amasị m ịkele Arnout van de Rijt na David Rothschild maka inye ihe eji eme ihe iji weghachite ụfọdụ n'ime esemokwu ha na akwụkwọ ha na Josh Blumenstock na Raj Chetty maka ịmepụta faịlụ ndị ọzọ.
Na Princeton University Press, M ga-ekele Eric Schwartz bụ onye kweere na ọrụ a na mmalite, na Meagan Levinson bụ onye nyere aka mee ka ọ bụrụ eziokwu. Meagan bụ onye nchịkọta kachasị mma nke onye edemede nwere ike inwe; ọ nọ mgbe nile iji kwadoo ọrụ a, n'oge dị mma na n'oge ọjọọ. Enwere m ekele dị ukwuu maka nkwado nkwado ya si dị ka ọrụ ahụ gbanwere. Al Bertrand mere nnukwu ọrụ na-aga n'ihu n'oge Meagan, Samantha Nader na Kathleen Cioffi nyeere aka mee ka ihe odide a ghọọ ezigbo akwụkwọ.
N'ikpeazụ, ana m ekele ndị enyi na ndị ezinụlọ m. Ị kwadoro ọrụ a n'ọtụtụ ụzọ, ọtụtụ mgbe na ụzọ ị na-amaghị. Ọ ga-amasị m ikele ndị mụrụ m, Laura na Bill, na nne na nna m, Jim na Cheryl, maka nghọta ha mgbe ọrụ a gara n'ihu na n'ihu. Ọ ga-amasị m ịkele ụmụ m. Eli na Théo, ị jụrụ m ọtụtụ ugboro mgbe m akwụkwọ ga-emesị okokụre. O mechara mechaa. Ma, nke kachasị mkpa, Achọrọ m ịkele nwunye m Amanda. Ekwenyesiri m ike na gị onwe gị na-echekwa mgbe akwụkwọ a ga-emesị mechaa, mana ị gosipụtara ya. Kemgbe ọtụtụ afọ m na-arụ ọrụ na akwụkwọ a, anọghị m nnukwu, ma anụ ahụ na uche. Enwere m ekele maka nkwado na ịhụnanya na-adịghị agwụ agwụ.